Nooca C HUB - Dongguan Huachuang Elektaroonigga Co., Ltd.
Waxaa la aasaasay 2008, Waxaan Huachuang waa soo-saare xirfad-yaqaan ah kaas oo kaliya diirada saara naqshadeynta, cilmi baarista iyo horumarka, soosaarka iyo iibinta USB-C HUB. Laga soo bilaabo maalintii ugu dambeysay ee aasaasida, waxaan mudnaanta siiney tayada iyo amniga. Sida ISO 9001-Warshadda la xoojiyay ee 2000, alaabteenu waxay waafaqsan yihiin heerar badan oo caalami ah sida CE, FCC, ROHS,AKHRIS iyo CCC. Waxa taas ka sii daran, waxaan had iyo jeer si taxaddar leh u bixinnaa abuuristaDhamaan alaabada loo qaabeeyey oo soo saartay annaga lafteena, Intooda badan waxay Shiinaha ku leeyihiin rukhsado, Qaarkooda waxay sidoo kale ka heleen Yurub iyo Mareykanka.
Thanks to awoodda adag ee horumarka, awoodda wax soo saarka oo ku filan iyo siyaasad tayo leh oo adag, alaabadayadu waxay heleen sumcad caalami ah oo ku saabsan naqshadeynta iyo waxqabadka wanaagsan. Waxaa loo istcimaalaa dalal damiir leh sida, USA, Finland, UAE, Canada, Singapore, Netherlands, Jarmalka, HK, UK, France, iyo Spain. Waxaan siineynaa alaabada OEM iyo ODM shirkadaha caalamiga ah ee caanka ah athome iyo dibeddaba, sida HP, Vivanco, Kobian, Dhiirigelinta, Vertex, Macher, Strax, iyo Gerth Gmbh.
Waxyaabaha oo dhan waxaa loo qaabeeyey annaga lafteena, badankood waxay leeyihiin astaamaha Shiinaha, qaar ka mid ah waxay leeyihiin aqoonsiyaal ku yaal Yurub iyo Mareykanka.
Waxyaabaha oo dhan waxay waafaqsanyihiin heerka CE / FCC / ROHS / REACH, intooda badan wali shahaadooyinkaan wali waa la haystaa.
3. Shaqo wacan
(waxay lamid tahay Apple qolof, inta badan alaab-qeybiyeyaashu waxay wataan daabacaadda 120 'laakiin annaga ayaa leh daabacaadda 180') sidoo kale waxoogaa yar oo gaar ah (tusaale ahaan: dhammaan dekedaha oo si habsami leh loo tuuray).
4. Tayo deggan
naqshad wareeg ah oo aad u wanaagsan oo ka dhigaysa tayada mid aad u deggan (inta badan HUB ee suuqa ayaa wali leh arrimo kulul, arrimaha la-aanta, iyo arrimaha faragelinta WiFi laakiin alaabadayadu wali waa la xalliyaa dhibaatadan.